कारोबार सञ्चालनको तयारीमा नागरिक स्टक डिलर
फरकधार / ११ माघ, २०७७
नागरिक स्टक डिलरले आगामी हप्तादेखि कारोबार थाल्ने भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार धितोपत्र व्यापारीको कार्य संचालन अनुमति दिएसँगै आगामी हप्तादेखि कारोबार थाल्ने तयारी गरेको कम्पनीले बताएको छ ।
दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्नका लागि सफ्टवेयरलगायत सम्पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेका कारण सिडिएससीबाट इन्ट्रिग्रेशन गराएसँगै कारोबार थालिने बताइएको छ ।
सेयर बजारमा हुने उतारचढाव रोक्नलाई संचालनमा ल्याउने भनिएको स्टक डिलर कम्पनी लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको थियो ।
कुल ५ अर्ब चुक्ता पूँजी तथा १० अर्ब जारी पूँजी रहेको नागरिक स्टक डिलर कम्पनीले आगामी हप्ताबाटै ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।
नागरिक स्टक डिलर संचालनमा आएसँगै बजारको उच्च उतारचढाव नियन्त्रण हुने विश्वास लिइएको छ । हाल बजार घट्दा उच्च दरले घट्ने र बढ्दा पनि उच्च दरले बढ्ने गरेको छ । नागरिक स्टक डिलर बजारमा प्रवेश गरेपछि कुनै निश्चित समूहले मिलेमतो गरी बजारलाई चलखेल गर्न नसक्ने समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
नागरिक लगानी कोषको सहायक कम्पनीका रुपमा सञ्चालित कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसैगरी, नेपाल टेलिकमको ९ प्रतिशत, पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि पनि ३० प्रतिशत सेयर छुट्याएको छ ।
प्रकाशित मिति : माघ ११, २०७७ आइतबार १३:५४:६,
नागरिक लगानी कोष
फरकधार | १२ फागुन, २०७७
| १६ फागुन, २०७७
नेकपा विवाद : केपी ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउनै हम्मे !
ममाथि हमला हुन सक्छ, मेरो ज्यान तलमाथि भए अनौठो नमान्‍नू : प्रधानमन्त्री
दिल्लीमा बाबुराम भट्टराई : स्वास्थ्य परीक्षणसँगै राजनीतिक उपचार पनि !
ओली हटाउन तयार भएन कांग्रेस, दाहाल-नेपालले अविश्‍वास प्रस्ताव अघि नबढाउने
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरी दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ ?
तामझामले भित्रिएको रेल त्रिपाल मुनि : सञ्चालनको अझै टुङ्गो छैन
केही दिनमै नयाँ सरकारः योगेश भट्टराई